रङ नम्बर (कथा) – Chitwan Post
‘म जिउँदो रहुन्जेलसम्म त्यस्ती केटीलाई बुहारीको रुपमा कदापि स्वीकार्न सक्दिनँ । हाम्रो इज्जतको थोरै पनि ख्याल आएन है तँ कुलंगार भातेलाई ? घरमात्रै आइज न, तेरो खुट्टो भाँच्छु मैले । तँ हाम्रो एउटैमात्र सन्तान, तैँले हामीलाई सोध्दै नसोधी यत्रो निर्णय गर्ने आँट कसरी गरिस् ? तँजस्ता कपूत हामीलाई चाहिँदैन । जुनदिनदेखि तैँले त्यस केटीलाई भित्र्याइस् , त्यो दिनदेखि तँ पनि हाम्रा लागि मरिस् । संसारमा अरु कोही केटी पाइनस् र तैँले, त्यस्ती केटी ल्याउनुपर्ने ?’
पण्डित जगन्नाथ नराम्ररी आफ्नो छोरा उमेशसँग पड्किए फोनमा । अनि, मोबाइल पण्डितनी बज्यैको मुखतिर झटारो हान्दै लम्किए माथिल्लो गाउँतिर ।
‘तेरा बुबा त्यस्तै हुन्, अल्लि तातो रिसका छन् । बुबाले गाली गरे भनेर पीर नगर । जे जस्तै भए पनि तैँले मन पराएर बिहे गरेको केटी हो, आइज छोरा । नाति र बुहारीलाई लिएर घर आइज । तेरो बुबाले बुहारी मन नपराए पनि नातिको मुख देखेपछि त कस्सो मन नपग्लिएला र ? जे भए पनि रगत त आफ्नै हो नि । तेरो बुबालाई सम्झाउने जिम्मा मेरो भो । मर्नुअघि बुहारी र नातिको मुख हेर्ने ठूलो धोको छ मलाई’– पण्डितनी बज्यैले रूँदै आफ्नो छोरासँग गुनासो पोखिन् ।
बेरोजगार [आजको कविता]
आमाको आग्रहलाई स्वीकार्दै उमेशले भन्यो– ‘हुन्छ आमा, यतातिरको चाँजोपाँजो मिलाएर एक महिनापछि बुहारी र नातिलाई लिएर घर आउँछु म । गल्ती मेरै हो, बुबाको मन दुखाएँ । केही नमज्जाको अनुभव मलाई पनि भैरहेको छ । म घर आएपछि बुबाको खुट्टा समाई माफी माग्नेछु । फेरि पहिलोपटक बुहारी लिएर आउँदै छु । हजुरहरुलाई पक्कै असहज त होला नै, त्यसमा हजुरहरुले कत्ति पनि चित्त नदुखाउनू है आमा ! मैले आफ्नो भविष्यको बारेमा धेरै सोचविचार गरेर नै पुष्पालाई बिहे गरेको हुँ । भाग्यले ठगे पनि पढेलेखेकी शिक्षित अनि संस्कारी केटी हो ऊ । सबैभन्दा ठूलो कुरो उसको र मेरो सोच मिल्छ । विचार मिल्छ । हजुरलाई काममा केही गाह्रो–साह्रो परे म पनि त छु नि सघाउने । आमा थाहा छ हजुरलाई, नाति त ठ्याक्कै हजुरबाजस्तो छ नि !’
बिहानको ६ः०० बजेको हुँदो हो । पसलमा चिया पिउने, ताजा तरकारी खरिद–बिक्री, दूधवाला साइकलको टिरिङ…टिरिङ, आदि इत्यादि मान्छेको चहलपहल टन्नै थियो चोकमा । चोकभन्दा दुई–तीन सय मिटरअगाडि एउटा रात्रिबस रोक्कियो ।
‘ए…जगन्नाथ बाजेको छोरा उमेश होइन त्यो ? परिवारै लिएर आएजस्तो छ’ भन्दै मान्छेहरु आँगन अनि चोक–चोकमा भेला भई मुखबाट एकबित्ताको जिब्रो निकाल्दै खासखास खुसखुसको भावमा उत्सुकतापूर्वक हेर्न थाले उमेश अनि पुष्पालाई । कोही नजिकै आउँदै पनि थिए ।
बस् अब के चाहियो, अर्काको कुरा नकाटी खाएकै नपच्ने हाम्रो समाजलाई ! भेला भए चोक, गल्ली अनि चिया पसलमा, अनि सुरू भयो उनै पुष्पाको बारे टीकाटिप्पणी ।
गाडीको छतबाट झारियो लगेज अनि बैसाखी पनि । सायद् आँगनीमा गाडीको आवाज सुनेर होला, अँगेनामा बसाली राखेको दूधको कुँडे त्यसै छाडी पण्डितनी बज्यै खुसी मुद्रामा छोराबुहारी अनि नाति भएतिर आइन् । उमेशले निहुरिएर आमाको गोडा ढोगिदियो भने पुष्पाले पनि सकीनसकी आफ्नी सासूको गोडा ढोगिदिइन् । सायद् कल्कलाउँदो तामाको टुसाजस्तो नाति देखेर होला पण्डितनी बज्यैका परेलीका बाँधहरु फुटौँलाझैँ गर्र्दै िथए । नातिलाई काखी च्यापी उमेश अनि पुष्पालाई ‘ल, हिँड जाऊँ’ भन्दै घरभित्र लगिन् पण्डितनी बज्यैले ।
केही समयपछि ट्रेमा चिया लिएर आउँदै गर्दा पण्डितनी बज्यै बोलिन्– ‘ए बूढा, छोडिदिनू न रिसाउन ! अब चाडबाड पनि आइसक्यो । बाउछोराको बोलचालै नहुँदा भर्खर घर आएकी बुहारीलाई कत्ति नरमाइलो लाग्दो हो । छोराबुहारी आएको पनि दुई–चार घन्टै भैसक्यो । ढोका थुनेर भित्रै बस्नुभा’छ । कत्ति रिस राख्नुभएको मनमा !’ भन्दै अल्लि पर बारीको डिलमा बसिरहेका छोराबुहारीलाई डाकिन् चिया पिउन ।
पण्डित बाजेले ढोका खोलेर बाहिर हेरे । छोराबुहारीलाई त्यहाँ नदेखेपछि जुँगामा ताउ लाउँदै गर्जिए– ‘त्यो कुलंगार मेरो छोरो होइन । काहीँ कोही भेट्टाएन त्यसले, अपांग केटीसँग बिहे गर्नुपर्ने ? जातपात, कुलघरान, कसकी छोरी हो केही थाहा छैन । टिप्यो, ल्यायो ! अलिकति पनि हाम्रो इज्जतको ख्याल राख्नुपर्छ कि पर्दैन त्यसले ?’
सायद्, छोराबुहारी बारीतिरबाट आउँदै गरेको देखेर होला, पण्डित बाजे बोल्दाबोल्दै रोक्किए ।
नाति केटो हातमा के–के, के–के लिएर खेल्दै खेल्दै तोते बोलीमा ‘हब्बा (हजुरबा), हब्बा (हजुरबा)’ भन्दै हजुरबा भएतिर लम्कियो ।
‘होइन, यसलाई कसले भित्र पठायो फेरि ?’
उनले दायाँ–बायाँ पल्याकपुलुक हेरी नातिलाई काखमा राख्दै गालामा चुप्पा खाइदिए ।
‘बाउ कुलंगार भए पनि छोरोचाहिँ साह्रै राम्रो जन्माएछ बजियाले ।’ (उनी मनमनै भन्दै थिए।) अचानक उनको ध्यान नातिको हातमा रहेको फोटोमा गयो । नातिको हातमा रहेको फोटो देख्नासाथ पण्डित बाजे साह्रै नराम्ररी झस्किए । उनले टेकेको जमिन नै भासिएको आभास भैरहेथ्यो उनलाई । उनी थरथर काँप्दै कुर्लिन थाले ।
पण्डित बाजे कुर्लिएपछि सबैजना भित्र आए ।
‘यो कसको फोटो हो ? कहाँबाट आयो यसको हातमा ?’
पुष्पाले डराउँदै छेउमा गएर दबिएको स्वरमा भनिन्– “यो मेरो आमाको फोटो हो । म दुई वर्षकी हुँदा अपांग जन्मिएँ भनेर बुबाले पनि छाडेर जानुभयो अरे, आमालाई र मलाई । अहिले त आमा पनि हुनुहुन्न ।’
पण्डित बाजेका हातगोडाहरु लगलगाउन थाले । अनुहारभरि चिटचिट पसिनाका धर्साहरु प्रस्टै देखिन्थे ।
किनकि, कुनै बेला पण्डित जगन्नाथ जागिरको सिलसिलामा एक छोरा अनि श्रीमतीलाई घरमै छाडी आफू चितवन सरूवा भएका थिए । यसै क्रममा उनी आफ्नै अफिसको एक महिला कर्मचारी सुनीतादेवीसँग नजिकिन पुगे । सुनीतादेवीको यस संसारमा कोही थिएन । कारण, पचास सालको बाढीमा भगवान् निर्दयी हुनाले सुनीतादेवी एक्लिएकी थिइन् । सुनीतादेवीलाई सहाराको खाँचो थियो । फलस्वरुप, बिस्तारै–बिस्तारै दुवैमा हिमचिम बढ्दै गयो । जसको परिणामस्वरुप एउटा अपांग छोरीको जन्म भयो । सुनीतादेवीलाई जीवनभर सहयोग गर्ने, तर आफू पहिल्यै विवाहित भएका कारण दोस्रो बिहे गर्न नमिल्ने भन्दै अलग्गिएका थिए, पण्डित जगन्नाथ ।
आज त्यही अपांग छोरीलाई बुहारीको रुपमा उनले आफ्नै अघिल्तिर देख्नुप¥यो ।
आजसम्म पनि उनको मनले चिच्च्याई चिच्च्याई उनलाई भनिरहेछ– ‘जीवनरुपी गणितको जोड–घटाउमा तैँले ‘रङ नम्बर’ डायल गरिस् जगन्नाथ !’